Heart Museum: မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား ........ငါ
မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား ........ငါ
Posted by Heartmuseum at 10:05 PM
ချစ်သူသည် ဘာညာကွိကွက်တွေလုပ်တတ်သောကြောင့် မမူးပဲရစ်သော ဦးသာဂိ( အရက်သောက်တော်တယ် ) နှင့်တူသည်။
ချစ်သူသည် ပြဿနာများ အမြဲဖန်တီးတတ်သော ကြောင့် သားဆိုး နှင့်တူသည်။
ချစ်သူသည် သိရဲ့သားနဲ့မသိချင်ယောင်ဆောင်မေးတတ်သောကြောင့်
အင်မတန်အမူပိုသော အကယ်ဒမီရ မင်းသမီးနှင့်တူသည်။
စိတ်ဓာတ်တွေ အကန့် အသတ်မဲ့
ဘ၀တိုးတက်မှုတွေကို နှောင့်နှေးရပ်တန့် 
( ကဗျာကို ၀င်ဖျက်သွားတာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ချိတ်မဆိုးကြေးနော့် ဘုန်းကြီးရေ့ ..........
သူရေးမှပဲ .. ဘာနဲ့တွေ့တွေ့ ချစ်သူကို သတိရနေတော့မှာပေါ့. ..
ကွန်ပြူတာနဲ့ရော တူနေဦးမယ်နော် . .. :P
စ တာပါ. . .
မမေ့နိုင်တာ မေ့သွားတာထက် ကောင်းပါတယ်.. မှတ်မိတာနဲ့ စွဲလမ်းတာ မတူဘူးလေ ..
အတင်း မေ့ပစ်ရပြီးတော့ စွဲလမ်းမှုကို မဖျောက်နိုင်ရင် မကောင်းဘူး . .
ဟုတ်လှချည်လား ကိုယ့်လူ .ကျန်သေးတယ် ချစ်သူက ဟိုဟာ နဲ့လည်းတူသေးတယ်လေ ..အဟီး ပန်းပွင့်လေး ပြောတာနော် :D စာသားလေးတွေလန်းတယ်ဗျာ မိုက်တယ် ထိတယ် :D
သေချာပြီ ကဗျာဆရာကိုယ်တိုင် ခံခဲ့ရလို့ထင်တယ် ဟီးဟီး
အစအဆုံး ဖတ်အပြီးမှာ ပထမဆုံးတွေးမိတာက “မှန်လိုက်တာ”လို့... သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဘာလို့ မေ့မရလည်းဆိုတာကိုလည်း နားလည်သွားပါတယ်။ ကဗျာကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုအညတရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ...
ကဗျာကမိုက်လှချည်လား..ရင်ထဲကဟာတွေ အံထွက်လာပြီထင်တယ်...ကြိတ်ထားဟ..ပြတိုက်ကြီးရ :)
ကဝေ၊ မာရ်နတ် ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေ နှင့် တူသော ချစ်သူ ကဗျာကို လာရောက် ခံစားပါ၏ ... မှန်၏ :)